Denjire Micheal Keating oo kulan la yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland | Ilwareed Online
Home WARKA DALKA Denjire Micheal Keating oo kulan la yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland
Denjire Micheal Keating oo kulan la yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland
Denjire Micheal Keating wakiilka Xoghayaha Guud Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya oo howlo shaqo maalmahan ku joogay dalka Finland ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan Finland.
Kulankaan ayaa waxaa ka soo qeyb galay aqoonyahano Soomaaliyeed waxaana halkaas warbixin ku saabsan Dhinacyada arrimaha Amniga, Siyaasadda, Xaaladaha Bani’aadanimo iyo Dhaqaalaha ee Xilligaan ka jira Soomaaliya.
Gudoomiyaha Ururka Midnimada Soomaaliyeed ee Somalilito Carshe Said oo ka mid ahaa Mas’uuliyiinta halkaasi goobjooga ka ahaa ayaa waxaan wax ka weydiiyay Kulanka wakiilka Qaramada midoobay arimaha Soomalia Keating uu la yeeshay qaar kamid ah dadka Soomaalida ee degan Finland oo iyagu shirkaasi diyaariyay.
Wuxuu sheegay Carshe Saciid in wax badan oo xaalada Soomaaliya ku saabsan ay la wadaageen Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya,islamarkaana ay ku war geliyaan iney muhiim tahay in si wada jir ah loo taageero geedi socodka nabada Soomaaliya.
Denjire Micheal Keating oo ka faaloonaya xaalada dalka Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in Dowlada cusub ee dhawaan la doortay ay ku talaabsatay hormaro badan oo dhinacyo badan taabanayo isla markaana ay la dagaalameen amnni darada iyo musuq-maasuqa.
Dhanka kale inta uu kulanka Socday wxaa halkaasi suaalo lagu weydiiyay wakiilka Qaramada midoobay ee arimaha Soomaaliya waxayna inta badan jawaab celintiisu ay ahayd in Dadka Soomaalida ay noqdaan dad iyaga wadankooda dhista iskana dhaafa danaha qabiilka iyo qabyaalada.
Previous articleMaamulka K/Galbeed oo Qorshaynaya Dagaal ka dhan ah Al-Shabaab
Next articleSomalia’s defence minister, army chief resign